Ny Chicago ny 30s
Araka ny filazan'ny mpanakanto maro dia lasa lavitra be ny foto-pisainan'ny glamour amin'izao androntsika izao. Ity vanim-potoana ity dia miverina amin'ny 30 taona lavitra ao amin'ny gangster Chicago. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nanao akanjo maromaro ny vehivavy, nampiseho ny firaisana ara-nofo, ny toetrany ary ny firaiketam-pony. Ny toetran'i Chicago tamin'ny taona 1930 dia ny maha-vehivavy, ny fahamendrehana ary ny fanatsarana, ny ezaka atao amin'ny fahatapahana, ny fahatokisan-tena ary ny endriny.
Ahoana no fomba fiakanjo ao amin'ny style of Chicago?
Raha mieritreritra ny fomba hikolokoloana ny akanjo ao Chicago ianao, dia tsy misy zavatra mora kokoa noho ny misafidy akanjo tsara tarehy, mahazatra mandritra izany fotoana izany. Io akanjo io dia fiovaovan-tarehy ho an'ny vehivavy 30 taona ary ny toetra lehibe indrindra amin'ny akanjo amin'ny fomba ao Chicago. Tamin'ny taon-jato faha-30 tamin'ny taon-jato farany teo, io akora indrindra amin'ny akanjon'ny fitafiana io dia nihoatra ny halavan'ny lohalika ary nosoloina rindrina mandaitra na soroka feno tsy misy fotony. Ankoatra izany, ny akanjo fitondran'ireo 30 taonan'i Chicago dia misy karazana tavy ambany sy ny fisian'ny orinasa manankarena amin'ny endriky ny kofehy, loko, kavina ary loko hafa. Ny nalaza indrindra dia modely amin'ny rambony miverina ary famolavolana lehibe ao amin'ny faritra dekollete. Ao anatin'ity akanjo ity, tsy afaka manampy ny saina ny zazavavy, izay tadiavin'ny vehivavy rehetra tamin'izany fotoana izany. Na dia izany aza, mbola lavitr'izay akanjo lava mahafinaritra ny akanjo dia mbola mijanona amin'ny hariva amin'ny lamaody ny 30s.
Miaraka amin'ny akanjo marevaka, ireo vehivavy 30 taona dia mila mampiasa akanjo maotina. Ny lohan'ny tovovavy dia voaravaka amin'ny satroka orina, na ny fehikibo, ary ny tendany matetika dia misy boribory boribory ary perla lava vitsivitsy. Saingy ny fahasamihafana faratampon'ireo vehivavy lamaody tamin'izany fotoana izany dia ny tohatra. Ny fifohana sigara eo amin'ireo vehivavy izay tsy mbola niasa nandritra ny 30 taona tany Chicago.
Kiraro amin'ny endrik'i Chicago
Mazava ho azy, ny fanesoana ny tongony matevina dia ilaina ny mametraka ny kiraro mety. Kiraro amin'ny style of Chicago dia mety sy azo ampiharina. Ny satroka ambany sy ny modelim-pametim-pejy dia niavaka tamin'ny kiraro tamin'izany fotoana izany.
Ny lokon'ny aloky ny pantyhose ve?
Photosession amin'ny vest
Ahoana ny fomba hanaovana zioga?
Baby wallpapers ho an'ny ankizilahy
Peas - toetra mahasoa
Hypnosis any lavitra
Fikorontanana volo amin'ny migraine
Trondro misy trondro lehibe - fiadanana ary tsy dia tsara
Museums any Kiev
Margot Robbie noho ny anjara asan'i Elizabeth I tao amin'ilay sarimihetsika vaovao dia niova tsy an-tsaiko
The Desert Mount
Amok - antony mahatonga ny fanafihan'ny herisetra tsy hay lazaina
Toerana any Korea Atsimo
Tsy i Pamela fotsiny ihany: ny nofinofin'ny "Rescuers Malibu" manonofy mba hampihenana ny tratra!
Kitapo ho an'ny zaza vao teraka
Oxytocine ho an'ny fanalan-jaza